China Czg kabili mass isixwayisi feeder Ukwakha futhi Factory | Izinsiza kusebenza zeChengxin Vibration
Isiphakeli esidlidliza kabili esisindayo sisebenzisa isimiso sobuningi obuseduze nokudlidlizela kwe-resonance inertial. Amandla we-shear ahlinzekwa ngenjoloba, futhi intwasahlobo enkulu yentshebe yenjoloba iyesabeka iminyaka eyishumi.
okuphakelayo okuphindwe kabili kobuningi kusetshenziswa umgomo wobuningi obuseduze nokudlidlizela kwe-resonance inertial vibration. Amandla we-shear ahlinzekwa ngenjoloba, futhi intwasahlobo enkulu yenjoloba yokudlidliza iyesabeka iminyaka eyishumi. Umshini wakhiwa ngomzimba wethangi, ukumiswa kwengxenye kanye ne-vibration excitation part. Ihlelwe ngeziphethu zenjoloba eyodwa noma kabili yokugunda iraba phezulu nangaphansi. Ipuleti lokucindezela elingezansi lixhunywe emzimbeni webhalansi ngamabhawodi, bese kuthi amapuleti ohlangothini lwesobunxele nangakwesokudla axhunywe nomzimba wethangi. Ingxenye enkulu yokudlidliza yingxenye yokuzijabulisa. Imoto yokudlidliza ifakwa kupuleti eliqondile ngemuva komzimba webhalansi. Amandla we-eccentric wemoto yokudlidliza asikiwe futhi adluliselwe emzimbeni wethangi ngebhulokhi yerabha ye-shear elungiswe emzimbeni webhalansi bese ucindezela ipuleti phezulu naphansi ukuze ubone ukuphakelwa okufanayo. Njengamanje, isetshenziswe kabanzi kumaphrojekthi amakhulu asekhaya, futhi isetshenziswe kumalahle, insimbi, amandla, okusanhlamvu nezinye izimboni, futhi ikhombisa izici zayo ezihlukile. Izinzuzo ezinhle zenhlalo nezomnotho sezitholakele.
Izici zobuchwepheshe zesiphakeli esidlidliza kabili
1. Usebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe besisindo esiphindwe kabili esiseduze ne-resonance, lo msebenzi uzinzile futhi unokwethenjelwa, futhi ukusebenza okungenazinkinga kungafinyelela eminyakeni engaphezu kwengu-2.
2. Inezinzuzo zamandla afanayo, i-amplitude enkulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukudla okufanayo, amandla amakhulu wokucubungula nomsindo ophansi.
3.Ubumbano nobumbano, luqinile futhi luqinile, isisindo esincane.
4. Imvamisa ye-amplitude ne-groove inclination angle ingalungiswa ukulawula ijubane lokudla nobungako.
5. Imodi yokufaka inokuvumelana nezimo okuqinile, futhi kungamiswa uhlobo, uhlobo lwesihlalo noma uhlobo lwenhlanganisela.
imodeli Amandla okwelashwa t / h Usayizi wokuphakelayo mm
izinga -10 -12
I-CZG1 5 10 15 50
I-CZG4 50 100 150 100
I-CZG5 100 150 200 150
I-CZG6 150 250 350 200
I-CZG8 400 600 800 300
I-CZG9 600 850 1000 350
I-CZG10 750 1100 1300 500
I-CZGK1 _ 200 250 100
I-CZGK2 _ 250 300 100
I-CZGK4 _ 300 400 100
Langaphambilini I-feeder yediski yokulinganisa ye-CypB
Olandelayo: Isiphakeli sokudlidliza kagesi